Nezvedu - Dongguan Pretty Shiny Zvipo Co., Ltd.
Dongguan Pretty Shiny Zvipo Co., Ltd.
Chipo chehunyanzvi & Mutengesi wePrimiyamu
Tiri vanotungamira vanopa zvinhu zvesimbi zvekuyeuchidza zvinhu, lapel pini & mabheji, menduru, dambudziko mari, makiyi, mabheji emapurisa, embroidery & dzakarukwa zvigamba, lanyard, nhare accessories, nguwani, zvinyorwa uye zvimwe zvekushambadzira zvinhu.
Ndiani isu pamwe?
Hwedu hwetsika tsika dzehukama hwemagariro - Yakadzika Lead, Phthalate Yemahara uye yakakwana eco-hushamwari kusangana nemasangano epasi rose 'bvunzo, pamwe nekuchengetedzwa kwevashandi uye simba rayo rakasimba simba, kukurumidza kuendesa, yakasarudzika mhando uye yemakwikwi mutengo, iyo Dongguan fekitori ine akapasa kuongororwa uye anowana mvumo kubva kune vane mukurumbira pasi rose makambani nemakambani, seSEDEX, Disney, NBCUniversal, McDonald, Starbucks, Coca Cola uye Bureau VERITAS.
Isu hatina MOQ kukamurwa pamirairo, unogona kuisa odha yako pane chero saizi huwandu inokwana zvaunoda chaizvo.
Nemazvo maumbirwo, hunyanzvi tekinoroji, nekuchenjerera hunoshamisa kuona zvinhu zvedu zvinoshandiswa nguva dzose zvinosangana nezvikumbiro zvako.
Pasina muganho wevanounza kunze kana wekutengesa makambani, iwe unozogamuchira iyo fekitori yakananga kutenga mutengo kubva kwatiri.
Nemakore eruzivo rwebhizinesi, kutaurirana kwakanaka uye nzwisiso yezvinodiwa zvevatengi, tinoronga nhanho yako inotevera pamberi uye nekupa rakakwana basa rehunyanzvi.
Vashandi ve2500 pamwe neepamberi otomatiki electroplating / kupenya uye kuchena maitiro, iwe unogona kunyatso kuvimba nesu pasina kunetseka kwekutakura.
Kubva pane dhizaini, kugadzira, QC, kurongedza kusvika pakuendesa, kuzadzisa zvese zvaunoda kamwe.
● Shanda Zvinofadza
● Vimbai Pamwe Chete
● Kubwinya Kugovana